အရဗီ-မြန်မာ အဘိဓာန် Download
ဟဂ်ျ နှင့် အွမ္မရဟ်လုပ်နည်း-မက္ကဟ်မဒီနဟ် သမိုင်းအကျဉ်း Download
ယနေ့ခေတ် အစ္စလာမ့်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၊ တမန်တော်မြတ် ( ص) ၊ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် နှင့် အစ္စလာမ့်လမ်းစဉ်အား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှာကြံတိုက်ခိုက်စော်ကားလျက်ရှိသည်။ သွားပုပ်လေလွင့် စွပ်စွဲလျက်ရှိသည်။ အစ္စလာမ့်ဘက်တော်သားများကလည်း တတ်နိုင်သမျှ ဖြေရှင်းကြသည်။ အတွေးအခေါ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျမ်းချက်များအားဖြင့်လည်းကောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြသည်လည်း ရှိသည်။ အချို့မှာ ပြေလည်မှု ရရှိသည်၊ အချို့မှာ ပို၍ပင် အခြေအနေဆိုးကုန်သည်လည်း ရှိသည်။ ဤနေရာ၌ ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရာများအနက် အချို့အချက်ကို တင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။
ပထမဦးစွာ အမြင်လွဲမှားမှု၊ စွပ်စွဲပုတ်ခတ်မှုများကို ရှင်းလင်းတုန့်ပြန်ရာတွင် ထင်သလောက် မထိရောက်ရသည့် အကြောင်းရင်းအချို့ကို သတိပြုမိသည်။ ထိုအကြောင်းရင်းများကို ခြုံငုံသုံးသပ်ရပါလျှင် -
၁။ အစ္စလာမ့်ရေးရာစာပေ/ဗဟုသုတများမှာ အစ္စလာမ့်အတွင်း/အပြင်လောကရှိ အများလူထုအတွင်း ကျယ်ပြန့်စွာ မရောက်နိုင်ခြင်း ( လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခွင့်အခက်အခဲများ၊ အခြေခံအကြောင်းအချက်/အသိပညာ/ဗဟုသုတထက် D0-and-Don'ts တို့ကိုသာ ဦးစားပေးမှုများ၊ သာသနာ့ပညာဟူသည် ကျောင်းတော်ဆင်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်/ရေးသားခွင့် လေ့လာခွင့်/ ဟောပြောပို့ချခွင့်ရှိသည် ဟူ၍ အတွေးချော်မှုနှင့်မှိုင်းသွင်းမှုများ၊ သာသနာနှင့်မွတ်စ်လင်မ့်လူထုရေးရာတို့အပေါ် အုပ်စုဖွဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်လိုမှုများ၊ အခြားသာသနာဝင်များထံ အစ္စလာမ့်သတင်းစကားပို့ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်မှု စသည့်အားနည်းချက်များ )
၂။ မွတ်စ်လင်မ်ထုအတွင်း စာပေလေ့လာမှုအားနည်းခြင်း၊ ပညာရေးနှင့်အတွေးအခေါ် နိမ့်ကျနေခြင်း၊ တတ်သိနားလည်လိုသူများအနေနှင့် သင်ကြားလေ့လာရန် စာအုပ်စာတမ်း၊ အခြေအနေ နှင့် အချိန်ပေးမှု ကွက်လပ်ဖြစ်နေခြင်း၊ ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုထက် ငြင်းခုံရန်ဖြစ်မှုနှင့် ၀ါဒရှေ့တန်းတင်မှုတို့၌သာ အားသန်နေခြင်း၊ သာသနာ့သုတေသနလုပ်ငန်းများကို မြုပ်နှံဆောင်ရွက်မှု/အားပေးကူညီမှု/နေရာပေးမှု ကင်းမဲ့နေခြင်း။
၃။ ကျမ်းချက်စာသားများကိုင်၍ စော်ကားပုတ်ခတ်မှုများအား ကုရ်အာန်၊ ဟဒီးဆ်အထောက်အထားတို့ဖြင့် ချက်ကျလက်ကျ ထောက်ပြဆွေးနွေးနိုင်ပါသော်လည်း..... ဗဟုသုတကင်းမဲ့၍လက်လွတ်စပယ်စော်ကားပုတ်ခတ်ချက်များကို အတွေးအခေါ်အားဖြင့် ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှု မပြုနိုင်ကြခြင်း၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်က အစွဲကြီးကာ အယူသည်းဝဲဂယက်မှ မရုန်းထွက်နိုင်ကြခြင်း စသည်တို့ကြောင့်ဟု ဆိုရပေမည်။
ယနေ့ On-line နှင့် Off-line နှစ်ဖက်လုံး၌ “ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်သည် အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေး(အာအိရှဟ်သခင်မ)အား ထိမ်းမြားရယူခဲ့ခြင်း ” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထိုးနှက်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ရပ် ၀င်နေပါသည်။ အပြင်လောကမှ အချို့မွတ်စ်လင်မ်တို့ကလည်း ထိုအတိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များရှိနေသောကြောင့် စွပ်စွဲချက်ရုပ်လုံး ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အခြေခံကျကျ လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်လိုက် စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့။
၁။ တမန်တော်မြတ်ကြီး မုဟမ္မဒ် (ဆွ)သည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို လူသားတို့အား ဆင့်ပြန်ပို့ချလက်တွေ့သင်ကြားပြသရန် ပွင့်ပေါ်တော်မူခဲ့သော နောက်ဆုံးအဆုံးသတ် တမန်တော်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်မြတ်၏ဘ၀သည် ကုရ်အာန်နှင့်တစ်သားတည်းသာဖြစ်ခဲ့၏။ (တမန်တော်ဆိုင်ရာသီးသန့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အချို့မှအပ) ကုရ်အာန်၏မည်သည့်အချက်နှင့်မျှ ဖီလာဆန့်ကျင်ခြင်း မရှိခဲ့။ မည်သည့်အတိမ်းအစောင်းမျှလည်း အဖြစ်မခံခဲ့ချေ။ ထိုအဖြစ်ကို မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သော အခြားပညာရှင်များကပင် သြချထောက်ခံထားရသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ်အချင်းချင်းသော်လည်းကောင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားနိုင်သော/ထိမ်းမြားပေးနိုင်သော အခွင့်အမိန့်ဟူ၍ လုံးဝ မပါဝင်ပါ။ သို့သာမက ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း(နိကဟ်)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရွယ်ရောက်မှုအသုံးအနှုန်းကိုသာ ပြဆိုထားကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ တွေ့ရပေမည်။ ဥပမာ - ကုရ်အာန်၏စူရဟ်(ကဏ္ဍ) ၄ ၊ အာယသ် (ပါဒတော်) ၃၊ ၆၊ ၁၉၊ ၃၄ ၌ အရွယ်ရောက်ခြင်း၊ အမျုိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဟူ၍သာ ဖော်ပြလျက် ၊ ယောက်ျားလေး-မိန်းကလေး-ကလေးသူငယ် စသည့် အသုံးအနှုန်းမျိုး မဟုတ်ကြောင်း တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏တိကျမှန်ကန်မှုအရလည်းကောင်း၊ ရစူလ်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ ပြိုင်စံရှားကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတော်အရ လည်းကောင်း နိကဟ်ပြုချိန် နှင့် ခန်းဝင်ချိန်တွင် “ အာအိရှဟ်သခင်မသည် အရွယ်မရောက်သေး ” ဟူသော အချက်မှာ မည်သို့ ဖြစ်နိုင်ပါအံ့နည်း။ အာအိရှဟ်သခင်မသည် နိကဟ်ပြုချိန်၌ အသက် ၆ နှစ်၊ ခန်းဝင်ချိန်၌ အသက် ၉ နှစ်သာ အမှန်ဟု တစ်ထစ်ချစွဲမှတ်ခြင်းမှာ တစ်ဖက်တွင် တမန်တော်မြတ်အား စံပြကိုယ်ကျင့်တရားရှင် အဖြစ် လက်မခံရာရောက်သွားနိုင်ပါသည်။
၂။ အစ္စလာမ်မထွန်းကားမီ အမိုက်ခေတ်၌လည်းကောင်း၊ အစ္စလာမ်ထွန်းကားပြီးနောက် ခေတ်အဆက်ဆက် အာရဗ်လူမျိုးတို့၏ရာဇ၀င်တွင် မည်သည့် ခေါင်းဆောင်၊ အကြီးအကဲကမျှ အရွယ်မရောက်သေးသူများအား လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ အဓမ္မရယူခြင်း၊ မတရားကျူးလွန်ခြင်း အစဉ်အလာဟူသည် မရှိခဲ့ချေ။ ရမ္မက်ကြီးသော ဒုစရိုက်သားများထံ၌ပင် ယင်းသို့ အမှုမျိုးကို မတွေ့ကြရ။ ထို့ကြောင့် တမန်တော်မြတ်ကြီးကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သည် ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါမည်လောဟု စဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါသည်။
၃။ တမန်တော်မြတ်ကြီးသည် အာအိရှဟ်သခင်မ(ရဿွိ)အား ဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်တွင် နိကဟ်ပြုပြီး၊ ဟိဂ်ျရီ ၃ ခုနှစ်တွင် မင်္ဂလာခန်းဝင်တော်မူခဲ့ကြောင်း ဘာသာရေးနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များအားလုံးထံ၌ အဆိုညီညွတ်ကြသည်။ ( တမန်တော်မြတ်၏ မက္ကဟ်မြို့မှ မဒီနဟ်မြို့သို့ ဇာတိစွန့်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း - ဟိဂ်ျရသ်ပြုလုပ်သည့်နှစ်မှအစပြုကာ ဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်ဟု စတင်ရေတွက်သတ်မှတ်သည် )။ ၄င်းမတိုင်မီ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုဒဏ်ကြောင့် မွတ်စ်လင်မ်အချို့ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသို့ ဟိဂ်ျရသ်ပြုကြသည်။ ထိုစဉ်က တမန်တော်မြတ် ကိုယ်တော်တိုင် ဟိဂ်ျရသ် ပြုရလိမ့်မည်ဟု မစဉ်းစားမိသေးချေ။ ထိုနှစ်တွင် ဂျုဘိုင်းရ် ဘင်န် မုသ်ွအင်မ် ဆိုသူက အာအိရှဟ်သခင်မအား လက်ဆက်ရန် ကမ်းလှမ်းဖူး၏။ ထိမ်းမြားနိုင်သည့်အရွယ်ဖြစ်၍ ကမ်းလှမ်းခြင်းဟူသည်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
၄။ တမန်တော်မြတ်၏ သမီးထွေး ဖာသွိမဟ် (ရဿွိ)သည် အာအိရှဟ်သခင်မထက် အသက် ငါးနှစ်ကြီး၏၊ ဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်၌ သမီးတော် ဖာသွိမဟ်သခင်မ၏အသက်သည် ၂၁ နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်၏။ ဤအကြောင်း၌ ဘာသာရေးနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များအားလုံး အဆိုညီကြ၏။ သို့ဆိုပါက ဖာသွိမဟ်သခင်မထက် ငါးနှစ်ငယ်သော အာအိရှဟ် သခင်မသည် ၄င်းဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်တွင် ( ၂၁ - ၅ = ၁၆ ) အသက် ၁၆ နှစ် ဖြစ်နေကြောင်း လွယ်လင့်တကူ သိနိုင်ပါ၏။ ထို့ကြောင့် အာအိရှဟ်သခင်မသည် နိကဟ်ပြုသော ဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်၌ အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီး ဟူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ မင်္ဂလာခန်းဝင်သော ဟိဂ်ျရီ ၃ ခုနှစ်၌ အသက် ၁၉ နှစ်ရှိပြီကိုလည်းကောင်း ထင်ရှားစွာ တွေ့လိုက်ရပေသည်။
၅။ ထင်ရှားခိုင်မာသည့်နောက်ထပ်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်တစ်ရပ်မှာ အာအိရှဟ်သခင်မသည် မိမိ၏အစ်မဖြစ်သူ အဆ်မဟ်သခင်မထက် ၁၀ နှစ်တိတိ ငယ်ရွယ်၏။ အဆ်မဟ်သခင်မသည် ဟိဂ်ျရီ ၇၃ ခုနှစ်တွင် အသက် ၁၀၀ တင်းတင်းပြည့်သည်ဟု ဖော်ပြကြ၏။ သို့ဆိုလျှင် ဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်၌ သူမ၏အသက်သည် ( ၁၀၀ - ၇၃ = ၂၇ ) ၂၇ နှစ် ဖြစ်လေသဖြင့် ၁၀ နှစ်ငယ်သောညီမငယ် အာအိရှဟ်သခင်မသည် အသက် ၁၇ နှစ် ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ အာအိရှဟ်သခင်မသည် နိကဟ်ပြုသော ဟိဂ်ျရီ ၁ ခုနှစ်၌ ၁၆/၁၇ နှစ်၊ မင်္ဂလာခန်းဝင်သော ဟိဂ်ျရီ ၃ ခုနှစ်၌ အသက် ၁၉/၂၀ နှစ်ဟူသော အဖြေမှာ ရှင်းလင်းစွာ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။ ဤတွင် တမန်တော်မြတ်နှင့်အာအိရှဟ်သခင်မအပေါ် မဖွယ်မရာ စွပ်စွဲသည့်ကိစ္စ ကြေမွပျက်သုဉ်းပြီ ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ......... အပြင်ရန်ကို ရှင်းနိုင်သော်လည်း အတွင်းပိုင်း၌ ပြဿနာတက်ပြန်တော့သည်။ အစ္စလာမ့်လောက၏ အခိုင်မာဆုံးဟဒီးဆ်ကျမ်းကြီး ခြောက်စောင် (ဆွိဟ စစ်သားဟ်)၌လည်းကောင်း၊ (ယင်းတို့ကိုမှီး၍ ရေးသားပြုစုထားသော) တမန်တော့် ထေရုပ္ပတ္ထိတော်များ၌လည်းကောင်း ၆ နှစ် နှင့် ၉ နှစ် ဟူ၍သာ ဖော်ပြထားသည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ ဖြစ်နေရပါသနည်း ? ကျမ်းဂန်များ၏သမိုင်း နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကြောင်းရပ်များအား ပြန်လည်ခြေရာကောက်ရန် မလွဲမသွေ လိုအပ်နေပေသည်။
(က) သမိုင်းကြောင်းများအရ ဟဒီးဆ်တော်များကို ကျမ်းအသွင်ဖြင့် စတင်ပြုစုခြင်းမှာ အိမာမ် မာလစ်က် (ရဟ်)၏ မုဝသ်ွသွာ ကျမ်းဟု သိရသည်။ သို့သော် အခန်းကဏ္ဍဖွဲ့စည်းတင်ပြပုံ၌လည်းကောင်း၊ ပညတ်ချက်ထုတ်ယူနိုင်အောင် လမ်းကြောင်းပြသရာ၌လည်းကောင်း၊ အထူးသဖြင့် ရယူလက်ခံပြုစုရာတွင် ခိုင်လုံတိကျမှုရှိစေရန် အလွန်တင်းကြပ်စွာသတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကြောင့်လည်းကောင်း (နှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ကျပြီးမှ ထွက်ရှိလာသော) အိမာမ် ဗုခါရီ (ရဟ်)၏ ဗုခါရီကျမ်းကြီးက ဟဒီးဆ်စုဆောင်းကျမ်းများအနက် ထိပ်ဆုံးနေရာ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ အစဉ်အလာကြီးမားလှသည့် ဗုခါရီကျမ်းပါအချက်အလက်ဖြစ်နေသည့်အတွက် မှားယွင်းလွဲချော်သည်ဟု မပြောဝံ့ကြခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် မလိုအပ်တော့ခြင်းဟု ယူဆလိုက်ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်တန်ရာ၏။
(ခ) ဗုခါရီကျမ်း၏နောက်မှ ထွက်ပေါ်လာသမျှ ဟဒီးဆ်ကျမ်းအစောင်စောင်မှာလည်း ဗုခါရီကျမ်းကို မှီငြမ်းခဲ့သည်ချည်းဖြစ်သည်။ မှန်ကန်ခိုင်မာလှပါသည်ဟု တညီတညွတ်တည်းသတ်မှတ်ထားသည့်ကျမ်းဖြစ်နေသဖြင့် နောက်ပိုင်းကျမ်းဂန်များထံ သြဇာလွှမ်းပြီး အစဉ်အဆက် မှတ်တမ်းတင်လိုက်ဖွယ် ရှိပေသည်။
(ဂ) တစ်ခါ အိမာမ် ဗုခါရီသခင်သည် ဟဒီးဆ်တော်ပေါင်း နှစ်သိန်းထိ ကျက်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ဟဒီးဆ်တော် တစ်သိန်းကို အာဂုံဆောင်နိုင်ခြင်း၊ ၄င်းတို့အား ရာဝီ(ဆင့်ပြန်သူ)အစဉ်အဆက်တို့၏ အမည်၊ ရာဇ၀င်များနှင့်တစ်ကွ မမှားမယွင်း ရွတ်ပြနိုင်ခြင်း၊ ထိုသို့ထူးခြားသော မှတ်ဥာဏ်၊ ကိုယ်ကျင့်သီလ နှင့် ပညာအရည်အသွေးအရ သူ၏ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုမှာ အဘယ်နည်းနှင့်မျှ မှားယွင်းချွတ်ချော်စရာ အကြောင်း မရှိပြန်။ ၄င်းပြင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာအခြားအလက်များလည်း ထပ်မံပါဝင်နေပြန်သည်။ ထိုရောအခါ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိဖတ်ရှုလေ့လာနေသော ကျမ်းမှာ အိမာမ်သခင်ကြီးကိုယ်တိုင် ရေးသွင်းထားချက်အစစ် ဟုတ်ပါသလား ဟူ၍ စဉ်းစားမိလာကြပါသည်။ သို့ဖြင့် အိမာမ်ဗုခါရီ၏အတ္ထုပ္ပတ္ထိ၊ ထိုခေတ်အခါ၏သမိုင်းကောက်ကြောင်းနောက်သို့ ခြေရာခံဆန်းစစ်ရာဝယ် ထူးခြားချက်အချို့ တွေ့ရပြန်လေသည်။
အိမာမ်ဗုခါရီသခင်သည် ဗုခါရီကျမ်းကြီးကို ပြုစုပြီးနောက် အများအားဖြင့်အီရန်နိုင်ငံတစ်ဝိုက် ကျင်လည်နေထိုင်ခဲ့၏။ ထိုခေတ်သမယတွင် ၄င်းနယ်ပယ်တစ်ခွင်အတွင်း အာရဗ်လူမျိုးကြီးဝါဒအားဆန့်ကျင်မှု၊ (အစ္စလာမ်မုန်းတီးရေးဝါဒီများသည် မွတ်စ်လင်မ်တို့အကြား ရောထွေးကာ) အစ္စလာမ်နှင့်ကုရ်အာန်ဆိုင်ရာအချက်တစ်ချို့အား ပြဿနာရှာရေးလှုပ်ရှားမှုတို့ဖြင့် အခြေအနေရှုပ်ထွေးလျက်ရှိခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်စက်၊ စာကူးစက် ဟူ၍ မရှိသေးသောကြောင့် ကျမ်းဂန်များကို မိတ္တူပွားလိုက လက်ရေးများဖြင့် ကူးယူရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကျမ်းကူးဆရာ/စာကူးဆရာတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ တွယ်ကျယ်လှသည်။ ထိုသူများအားလုံးမှာ အရဗီ ကျွမ်းကျင်သော်လည်း လူတိုင်းက မွတ်စ်လင်မ် မဟုတ်ကြ။ တစ်ဖန် ထူးချွန်သော အိမာမ်ဗုခါရီသည် သူ၏ ဗုခါရီကျမ်းကြောင့် အလွန်အမင်း ထင်ရှားကျော်စောမှု ဖြစ်လာရာဝယ် သာသနာကို ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒ၏အောက်သို့သွတ်သွင်းလိုသည့် အာဏာပိုင်နှင့်လူကုံထံတို့အပါအ၀င်) ခေတ်ပြိုင်ပညာရှင်များစွာ၏ မနာလိုဝန်တိုခြင်း၊ ခြေထိုးခံဒုက္ခပေးခြင်း၊ ကာဖိရ်ဖသ်ဝါထုတ်ခြင်း၊ မွတ်စ်လင်မ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ၀ိုင်းကြဉ်အောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြံစည်ခြင်း စသည်တို့ကို မပြတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရရှာသည်။ သူ၏ကျမ်းသည်လည်း (လက်ရေး)မိတ္တူများစွာ ပွားခြင်းကိုခံရသည်။ ဤတွင် ဖြစ်နိုင်ချေအဖြေနှစ်ရပ်ကို ယေဘူယျအားဖြင့် တွေ့ကြသည်။
မနာလိုမရှုစိမ့်သော ပညာရှင်တစ်ဦး/တစ်ဖွဲ့မှလည်းကောင်း၊ အစ္စလာမ်အားအတွင်းကြိတ်မုန်းတီးနေသည့် မွတ်စ်လင်မ်မဟုတ်သော စာကူးဆရာ တစ်ဦးဦးမှလည်းကောင်း ၁၆/၁၉ နေရာတွင် အရဗီစကား အ ရှ ရ (တစ်ဆယ်)ကို တမင်ချန်လှပ်ပြီး ၆/၉ ဟု ရေးသွင်းလိုက်လေသလော
( သို့တည်းမဟုတ် )
အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းကူးယူလာကြရာတွင် တစ်ဆက်ဆက်၌ စာကူးဆရာ၏ပေါ့လျော့မှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာသော ၄င်းမှားယွင်းမှုကိုပင် အစဉ်တစိုက် ထိန်းသိမ်းလာကြခြင်းလော ?
ယင်းအဖြစ်မှန်ကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတစ်ပါး မည်သူမျှ မသိနိုင်တော့ပြီ။ အကြောင်းမှာ (အဆ်ွဟဗ်တော်တို့၏လက်ရေးမူကုရ်အာန်များကို ယနေ့တိုင် ကျန်ရစ်တွေ့ရှိနေရသော်လည်း) အိမာမ် ဗုခါရီကိုယ်တိုင်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် မူရင်းဗုခါရီကျမ်းလက်ရေးမူကိုကား ယနေ့ထက်တိုင် ရှာမရဘဲ ပျောက်ဆုံးနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသတည်း။
( The Muslim Digest (1996, Jan-Feb) မှ Shageer Niyarzi ရေးသားသော What is the real age of Aisha Siddiqh when she married Prophet Muhammad (S) ? ကို မှီး၍ ရေးသားတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ )
** ဖော်ပြပါဆောင်းပါးသက်သက်ကို အစ္စလာမ်မဂ္ဂဇင်း/စာစောင်တစ်ခုတွင် မြန်မာဘာသာပြန်ဖော်ပြဖူးသည်ဟု သိရပါသည် **
( သတိပြုရန် )
ဟဒီးဆ်တော်ပေါင်း ထောင်ချီ၊သောင်းချီရှိသည့် ကမ္ဘာကျော် ဗုခါရီ နှင့် မွတ်စ်လင်မ် ကျမ်း၌ ယင်းသို့သံသယဖြစ်ဖွယ် - စောဒကတက်နိုင်ဖွယ် ဟဒီးဆ်တော်များမှာ တစ်ရာပိုပိုခန့်မျှသာ ပါဝင်ကြောင်း သိထားရပါမည်။ ပမာဏအနည်းအကျဉ်းမျှ စောဒကတက်နိုင်ဖွယ်အခြေအနေရှိယုံမျှဖြင့် ဟဒီးဆ်ကျမ်းများကို ပယ်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ (တမန်တော့်ရွှေနှုတ်တော်ထွက်သြ၀ါဒ) ဟဒီးဆ်မှန်သမျှ စိတ်ချခိုင်မာမှု မရှိဟု မမှတ်ယူနိုင်ကြောင်း အထူးသတိပြုအပ်ပေသည်။